Ihe ị ga-amata gbasara GPS Usoro Sistem | Singapore Top Mini GPS Personal Tracker maka Autism / Autistic Kids & Dementia okenye
Ihe ị ga-amata gbasara sistemụ GPS
GPS (Global positioning System) ndị na-egwu traktọ bụ ngwa elektrọnọnị ụgbọ elu, na-enye ndị nne na nna, ndị njikwa ya, na ndị nwere ụgbọala inyocha akụ na ụgbọala ha ozugbo. GPS tracker, nke edoziri maka ụgbọ ala nwere ike ịnye oke ọsọ na data ọnọdụ, ebe ọnụọgụ nhọrọ dị ala na-edekọ ụdị ozi a maka iji mechaa. Na nkenke, ọ bụ isi ọrụ nke sistemụ GPS na-ewebata site na iji nke Netiwọki Satọdeema (GNSS). Igwe okwu microwave na-ezipu site n’usoro a nke na-eziga ya site na seta ngwaọrụ GPS. Enwere ike ịchọpụta ụdị ụgbọ ala ahụ na smartphones na ụgbọ ala. Ihe omuma di n’ime ya bu nke agbasara n’elu ugbo ala bu ihe dika udiri ugbo ala, ebe, uzo ozo, wdg.
N'ihe banyere traktọ GPS ụgbọala ma ọ bụ teknụzụ nkwukọrịta nke ụgbọala, ihe dị n'ụdị anọ bụ akụkụ nke netwọko a na-eme ka enwere ike, gụnyere:
Ngwaọrụ traktọ GPS
Ka anyị nyochaa Olee otu GPS Sistemụ Sistem
Might nwere ike ịmara, GPS Ndepụta Sistem na-eji bọọdụ akara satellites iji chọpụta ọnọdụ ebe ngwaọrụ gị bụ nke ahaziri iche maka ebumnuche ahụ. Isi echiche dị n’azụ GPS tracker na-eji usoro akpọrọ Trilateration iji kwado ma ọ bụ chọta ọnọdụ nke ngwaọrụ ahụ dabere n’ebe dị anya site na Satellite GPS atọ. A na-eji teknụzụ ndị ị nwere ike ị na-eji kọmputa ma ọ bụ sistemụ ịnya ụgbọ gị rụọ ọrụ. Enwere obere ọdịiche dị n'etiti onye na-egwu GPS na sistemụ ịnya ụgbọ ala nke ịnya ụgbọ ala na-enye ọnọdụ gị na usoro ịkwọ ụgbọala, ebe tracker na-ekwuputa ebe ndị ahụ ozugbo ma ọ bụ na-edekọ ihe banyere ịnya ụgbọ ala.
Sistemụ GPS GPS eji eme ihe n'ime ụgbọ ala nwere ike ikesa ọnọdụ ahụ, na nkenke, ọ na - ejikarị otu teknụzụ ekwentị ekwentị gị jiri jikọọ na ụwa site na ịntanetị ma ọ bụ kpọọ oku iji soro ndị ikwu, enyi. , na ndị ezinụlọ anyị. Nke ahụ bụ isi ihe ụfọdụ ndị na-anya ụgbọ ala GPS chọrọ ego ndenye aha kwa ọnwa.
Nwere ike ịzụta sistemụ GPS maka ojiji nkeonwe dị ka nsuso ụgbọ, ndị ọrụ nleba anya, na ndị ọzọ. Dị ụzọ atọ GPS dị iche iche dị, agbanyeghị na GPS enwere ekwentị juputara n'ụzọ zuru oke ma nwee ike ịrụ ọrụ n'ụzọ ọ bụla dabere na ngwa awụnyere na ekwentị.
Ndị na-anya ụgbọ elu
Ekpochie GPS Trackers
Ugbo ala OBD GPS Trackers
Ọrụ nke ngwaọrụ nsuso GPS nọ n'otu ụkpụrụ ahụ, mana kama igosipụta ozi dị na ngwaọrụ ọ bụla, microprocessor dị na ngwaọrụ ahụ ga-agbakọ kpọmkwem ebe ahụ wee nyefee data ahụ emechiri na sava etiti na ntanetị site na iji ekwentị. Mgbe nke ahụ gasị, sava na-akwado ikpo okwu iji gosipụta ọnọdụ dị ugbu a na ụzọ akụkọ ihe mere eme nke ngwaọrụ ahụ, yana ọsọ na mkpọtụ.
Enwee uru ndị ọzọ nke sistemụ GPS nke ndị azụmaahịa nwere ike ibunye ya ka ọ soro ọnọdụ ndị na-anya ụgbọ elu na-ahụ maka omume ndị ọrụ ha. Lersfọdụ ndị njem etinyegoro ngwaọrụ GPS ka akpa iji gbochie ya izu ma ọ bụ furu efu. Suchdị usoro a bakwara uru maka ezinụlọ. Ezinụlọ nwere ike iji ngwaọrụ GPS mee ka ụmụaka leba anya, ụmụaka, ma ọ bụ anụ ụlọ.
Tupu ịhọrọ ihe ọchọ ihe GPS, ịnwere ngwaọrụ gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ igafe ma ọ bụ ezigbo oge ọchọ ihe.
Gịnị bụ Ndị Ọkwọ ụgbọala Na-agafe?
A naghị ekwe ka ndị ọrụ soro usoro ọ bụla mmadụ na-eme ka ọ na-eji Passive Tracker. Nke mbu, enwetara ihe omuma ndia wee budata na PC ka ihu hu. Ckersdị trackers ndị a na-adịkarị ọnụ ala n'ihi na ha anaghị akwụ ụgwọ ndebanye aha kwa ọnwa. Dịka ọmụmaatụ, eze nke ngwaọrụ nwere ike ịnakọta data dịka ebe usoro ahụ kpaliri n'oge awa 12 gara aga. Echekwara data a kpokọtara na sistemụ GPS a na ebe nchekwa ma ọ bụ kaadị ebe nchekwa, nke enwere ike ibudata ya na PC ka emechaa nyocha.
Kedu ihe bụ Trackers na-arụ ọrụ?
N’aka nke ọzọ, ịhazi ma nyefee data n’oge ejiri sistemu eji agagharị bụ nke a maara dị ka Ọrụ Nsuso. Will ga - enweta ezigbo oge gbasara ekwentị site na ekwentị mkpanaaka nke na - enye gị ohere inyocha ihe niile ma ọ bụ ihe bara uru. Kwesịrị ịkwụ ụgwọ ụgwọ kwa ọnwa maka iji ọrụ a. Ọ bụ otu nhọrọ kacha mma maka iji azụmaahịa dịka nsuso ụgbọ mmiri, ileba ndị mmadụ anya, gụnyere ndị agadi ma ọ bụ ụmụaka, ebe ọ na-enye onyinye ha ịmara ebe ndị ha hụrụ n'anya nọ, ma ọ bụ na oge ma ọ bụ na ha kwesịrị ịbụ njem.
Sistemụ ekwentị Ekwentị Ndepụta
Ọganihu na teknụzụ nkwukọrịta na-eme ka nsuso mkpanaka dị mfe maka onye ọ bụla. Ugbu a, ngwaọrụ mkpanaka na-abawanye ma na-enye gị ike iji nwee mkparịta ụka. Sistemụ ekwentị GPS ekwentị bụ otu n'ime ọganihu ndị ahụ. Ekwentị na-akpọsa mgbama redio na-eji ekwentị, ọ bụrụgodị na ejighị ya ma ọ bụ na-akpọ. Companieslọ ọrụ ekwentị niile nwere ike ịkọwa ebe ọnọdụ ekwentị ziri ezi ruo ọtụtụ afọ site na iji ozi triangular si n'ụlọ elu ekwentị ekwentị na-enweta akara.
Site na iji teknụzụ GPS, ọnọdụ onye ọ bụla na-eji mkpanaka GPS dabere na ngwa ngwa nwere ike iso ya n'oge ọ bụla. Usoro ekwentị GPS Ekwentị nwere ike ịbụ ezigbo ọrụ bara uru maka echiche azụmahịa, ọkachasị ndị nwe ya, ndị enyi, ndị nne na nna na ndị ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụdị sistemụ GPS dị otú ahụ, ị ​​nwere ike nweta aka gị na ngwaahịa dị mma dị otú a akọwapụtara nke ọma maka ebumnuche GPS. Dị ka ị maara, teknụzụ ọgbara ọhụrụ emeela ka ndụ anyị nwee ntụsara ahụ na ịchọta ụzọ ọhụụ kwa ụbọchị iji mee ka ahụ dịkwuo mma. Ma ị ga-elekwasị anya n'ụgbọ mmiri, ụmụaka, ndị agadi, ma ọ bụ anụ ụlọ ọ bụla dabere na mkpịsị aka gị. N'ụbọchị ndị a, ahịa jupụtara na ngwaahịa ndị na-enye ọrụ nke sistemụ GPS ma ị na-arụ ọrụ nke ọma. Somefọdụ n’ime ha bụ ndị a:
Trackmụaka Tracker Watch
GPS Tracker Watch maka andmụaka na Ndị Agadi
Ọkpụkpọ GPS GPS nkwonkwo ụkwụ
Ikpuchi GPS GPS
Nzuzo 5632 1 Echiche Taa
Kedu otu sistemụ GPS si arụ ọrụ?
Etu ị ga - esi họrọ Sistemụ GPS Sistem kacha mma maka…
Ọrụ nke sistemụ nrụọrụ Global (GPS)
Kedu ka sistemụ GPS Global si arụ ọrụ…
Iji GPS Ndepụta Ijide Onye aghụghọ
Etu esi achọta GPS Ndepụta ma ọ bụ Ngwa Device na-ege ntị n'ụgbọ ala